नाम मात्रको राजावादी पार्टीहरु हो र ? « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
नाम मात्रको राजावादी पार्टीहरु हो र ?
राजावादीको नाम बाट जति पनि राजावादी पार्टीहरु छन एकढिक्का नहुनुमा दोषीहरु को को ? के नाम मात्रको राजावादी पार्टी हो र ! राजावादीको नाममा संचालित जति पनि पार्टीहरु छन वास्तविक राजावादीहरु नै हुन भन्ने प्रश्न चिन्ह पनि खडा भएको छ । राजालाई खोपीको देवता पनि भनिन्छ । राजालाई दरबार अर्थात निर्मल निवास भन्दा बाहिरको मुलुकको वास्तविकताहरु बारे नै अवगत हुन पाउँदैन भन्ने गुनासोहरु बेला मौकामा सुन्न पाइन्छ सत्य तथ्य के हो ?
राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नेपाली जनताहरुले पुनः राजगद्दीमा ल्याएर राख्लान भन्ने भ्रममा नपर्नु होला भन्ने मेरो आग्रह छ । मुलुकमा जनताहरु छन भन्ने कुरामा भर पर्नु भयो भने सय वर्षमा पनि नेपालमा राजसंस्था फर्कन्न हाम्रो मुलुक नेपालमा वास्तविक जनताहरु नै छैनन । राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरु छन । राजाले यसरी सजिलैसँग सत्ता छोडेको इतिहास कतै पनि छैन । मुलुकमा जनताहरु भएको भए पो राजाको महत्त्व र योगदानलाई कदर गर्थे ! राजाको पालामा मालपोत तिर्नु पर्दैन थियो ! नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकालाई एकीकृत सम्पत्ति कर तिर्नु पर्दैन थियोे ! सांसदहरूको संख्या अधिकतम २०५ भन्दा बढी थिएन ! अहिले संघीय संसद र प्रदेश संसद गरी ८८४ जना सांसदहरूको संख्या छ । मुलुकमा जनताहरु भए पो यी कुराहरू समझमा अर्थात दिमागमा आउँथ्यो ! राजाको परिवारहरुले खाएको सहन भएन तर अहिले ८८४ जना सांसदहरूले राज्यकोष ढुकुटी ब्रहम्लुट गरेको कसैले देख्दैनन ! मुलुकमा जनताहरु भए पो ?
राजा ज्ञानेन्द्र शाह ज्यु लाई मेरो सुझाव र सल्लाह हाम्रो मुलुकमा जनताहरु छन र जनताहरुले राजगद्दीमा बसाली देलान भन्ने भ्रममा पर्नु भयो भने सय वर्षमा पनि मुलुकमा राजसंस्था फर्कन सक्दैन असम्भव छ किनभने नेपालमा वास्तविक जनताहरु नै छैनन । राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजदरबार छोडनु भन्दा पहिले पत्रकार सम्मेलन मार्फत दिएको संदेशको दृश्य हेर्ने हो भने नियम, ऐन र कानुन बमोजिम विक्रम सम्वत २०४७ सालको संविधानको अन्त्य भएको छैन । यसकारण राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजनीतिक दलहरूका नेताहरूलाई जिम्मा दिएको नासो तत्काल कुटनीतिक प्रयास मार्फत फिर्ता लिने समय आइसकेको छ अर्थात राजा ज्ञानेन्द्र शाहले अब सत्ता खोसेर लिनुपर्ने समय आएको छ । स्वतन्त्र नेपाली नागरिक: राकेश कुमार शर्मा । जिल्ला मकवानपुर, हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर-०२
प्रकाशित मिति : आश्विन २९, २०७७ बिहीबार ३ : ०४ बजे